Qiimaha Xog Aad U Badan | Martech Zone
Qiimaha Xog Aad U Badan
Friday, May 31, 2013 Khamiis, May 30, 2013 Kelsey Cox
Maalin walba, 2.5 quintillion bytes oo xog ah waxaa abuuray ururada iibka iyo suuqgeynta. In kasta oo kaydinta buuraha xogta la rajaynayo in la kashifo fikradaha waxqabadka leh waxay umuuqan kartaa adeegsi wax ku ool ah waqtiga iyo lacagta ganacsiyada, kharashyada laxiriira ayaa kaa yaabi kara.
A dhawaan infographic abuuray by Matoorada Lattice ayaa muujinaya in 88% kooxaha suuqgeyntu waxay ku seegayaan fursadaha ganacsi sababo la xiriira macluumaad ku filan. Kuwa la wareystay, 24.5% waxay dareemeen inay caqabad ku yihiin xogta iyo waqtiga ay ku qaadanayso cilmi baarista, halka inta kale ee jawaab bixiyaashu ay ahaayeen kuwo aan qalabaysnayn ama aan danaynayn in ay si sax ah u maareeyaan qulqulka xogta.
Marka lagu daro la'aanta ku filan istaraatiijiyada xogta weyn, keydinta iyo falanqaynta macluumaadka dhab ahaantii waa qarashka ganacsiyada lacag badan. Celceliska iibka caadiga ah wuxuu ku bixiyaa celcelis ahaan 4 saacadood / usbuucii diyaarinta iibka, iyo hal milyan oo reps iibka hadda ee Maraykanka, tani waxay u dhigantaa $ 50 bilyan sanadkii.
Waa tan eeg qoto dheer waxa Lattice qaawiyey:
Tags: xog weynistaraatiijiyada xogta weynDatakaydinta xogtainfographicistaraatijiyad
Kelsey Cox waa Agaasimaha Isgaarsiinta ee Safka shanaad, hay'ad hal abuur leh oo ku takhasustay muuqaalka xogta, sawir-qaadista, ololeyaasha muuqaalka, iyo dijitaalka PR-ka ee Newport Beach, Calif. Waxay aad u jecel tahay mustaqbalka waxyaabaha dijitaalka ah, xayeysiinta, sumadda iyo qaabeynta wanaagsan. Waxay sidoo kale runtii ku raaxeysataa xeebta, karinta, iyo biirka farsamada.
Goorma ayey dadku isdiiwaangeliyaan Webinars?
Ma Tahay Macaamiil Macaamiil ah?